Qalanjada Taajka Quruxda Hablaha Ingiriiska Ee (Miss England 2014-Ka) Oo Ku Biirtay Derbi Jiifka Dalkeeda | Hawraar
Qalanjada Taajka Quruxda Hablaha Ingiriiska Ee (Miss England 2014-Ka) Oo Ku Biirtay Derbi Jiifka Dalkeeda
Sida ay ku warantay jariirada dalka Ingiriiska ka soo baxda ee (Daily Mail), qalanjada quruxda sanadkan u qaaday hablaha dalka Ingiriiska, ama sida loogu yeedho haysata taajka Quruxda ee Miss England 2014-ka, oo lagu magacaabo, Kareena Terrell ayaa muddo hal habeen ah u hoyan doonta banaanka.
Waxaana go’aanka ay gabadhani ku gaadhay inay derbi jiifka dalkeeda ku biirto, ay qayb ka tahay dedaal ay ku dhiiri gelinayso ololayaasha lagu taageerayo derbi jiifka dalka Ingiriiska oo tiradoodu aad u sii kordhaysay sanadihii u danbeeyay.
Terrell oo afar iyo labaatan jir ah, kuna guulaysatay sanadkan taajka quruxda haweenka Ingiriiska iyo ka quruxda jaamacadaha ee Cambridge jaamacada lagu magacaaba qaban qaabiso, ayaa sida ay ku warantay jariiradu waxa ay derbi jiifnimada iyo nolosha ay ku nool yihiin dadka ku dhibaataysan derbiyadu, ku qaadan doonta afar iyo labaatan saacadood.
Sida ay u xustay gabadhaasi waxa ay nolosha dhabbta ah ee ay ku nool yihiin la dhadhamin doontaa, labo kun iyo afar boqol oo ka mid ah derbi jiifka kuwa ugu darxumada iyo nolosha liita.
Warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa si wayn u qaada dhigaysay, talaabada dhiiri galinta ah ee ay Terrell ku dhaqaaqday, waxaanay baahinayeen, iyada oo degaysa gidaar ama meel jid garabkeed ah, kuna seexanaysa, dhar dug ah, kartoomo iyo baco, kuwaas oo ay sida derbi jiika kale ka soo urursatay jidadka iyo meheradaha iska daadinaya.
Waxa kale oo ay gabadhani markii ugu horaysay cunto ahaan u cuni doontaa, Raashin ah cuntada hanbada ah iyo hadhaaga khudaarta ee hudheelada iyo guryuhu iska soo daadiyaan, waxa kale oo ay biyo ahaan u cabi doontaa kuwo ay ka soo dhaansatay qasabadaha.